अरुको उपचारमा निरन्तर सेबा दिदा दिदै आफैलाई संक्रमण भएपछी सदाको लागि संसार त्यागे डा. मुकेश चौधरीले, मनमा मायाँ भए RIP लेख्नु होला ! – Dainiki Online
अरुको उपचारमा निरन्तर सेबा दिदा दिदै आफैलाई संक्रमण भएपछी सदाको लागि संसार त्यागे डा. मुकेश चौधरीले, मनमा मायाँ भए RIP लेख्नु होला !
19/05/2021 adminLeaveaComment on अरुको उपचारमा निरन्तर सेबा दिदा दिदै आफैलाई संक्रमण भएपछी सदाको लागि संसार त्यागे डा. मुकेश चौधरीले, मनमा मायाँ भए RIP लेख्नु होला !
काठमाडौ । महामारीले फेरी एक जना डाक्टरलाई लगेको छ । सिरहामा एक चिकित्सकको निधन भएको हो । लहान नगरपालिका वडा(६ घर भएका अर्थोपेडिक विशेषज्ञ डा। मुकेश चौधरीको
निधन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
उनी अस्वस्थ्य भए पनि अस्पताल भर्ना भएका थिएनन् । संक्रमित भएका उनको निधन भएको लहान नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक रामसुन्दर यादवले जानकारी दिए ।
डा चौधरी संक्रमित भए पनि अस्पताल नगएर ९ दिनदेखि होम आइसोलेसनमै बस्दै आएका थिए । तर अचानक स्वास्थ्यमा थप समस्या आएपछि उनलाई सोमबार साँझ उपचारका लागि विराटनगरस्थित
विराट नर्सिंङ लगिएको थियो ।
तर अस्पतालमा उपचार सुरु हुन नपाउँदै उनको मृत्यु भएको हो । ३५ वर्षीय डा। चौधरी लहानमा डाइनोष्टिक सेन्टर सञ्‍चालन गर्दै आएका थिए । उनी सोही सेन्टरमा सेवा
दिने क्रममा संक्रमित भएका थिए ।
Tagged डा. मुकेश चौधरी
दाउन्नेमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ४० जनाभन्दा बढी घाइते